किन मनाइन्छ भ्यालेन्टाइन डे ? | Tungoon
किन मनाइन्छ भ्यालेन्टाइन डे ?
काठमाडौँ । आज प्रेम दिवस अर्थात भ्यालेन्टाइन डे फेब्रुअरी १४ गते विश्वभर नै भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस मनाइने गरिएको छ। यो पर्व पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको सहादतसँग सम्बन्धित छ।
तत्कालीन रोमन सम्राट् क्लाउडियस द्वितीयले युवा प्रेम र विवाहतिर लागे सैनिक सेवा प्रभावित हुन्छन् भन्ने ठानेर यसलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तर भ्यालेन्टान भने सम्राट्को निर्णयलाई धर्मविरुद्ध भन्थे। उनको बुझाइ थियो । अनुशासनको दायराभित्र हुने प्रेम र आकर्षणमा ईश्वर पनि खुसी हुन्छन्। त्यसैले उनले राजाज्ञा अवज्ञा गर्दै प्रेम र विवाहका लागि प्रेरित मात्र गरेनन् युवायुवतीका जोडीहरू तयार पारी सार्वजनिक स्थलमै सामूहिक विवाह कार्यक्रम सम्पन्न गरे।
निषेधाज्ञा तोडेको आरोपमा उनलाई ई। पू. २७०को फेब्रुअरी १४ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। प्रेमका लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने उनै पादरीको सम्झनामा भ्यालेन्टाइन डे मनाउन थालिएको हो। विश्वभरि नै यस दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने गरिन्छ।
प्रेम दिवसको अवसरमा आजभोली युवायुवती हरु विभिन्न कार्यक्रम गरी रमाइलो गरि मनाउने पनि गरिन्छ भने नयाँ युवा युवती हरु आजको दिनलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिन पनि भनेर लिने गरिन्छ ।
रातो गुलाफ प्रेम र मनोभावनाको प्रतीक हो । भ्यालेन्टाइन डे मा सबैभन्दा धेरै रातो रङको गुलाफ आदानप्रदान हुन्छ । यसलाई प्रेम-प्रस्तावका रूपमा प्रदान गरिन्छ । फूल स्वीकार गर्नु प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरेको कुराको प्रतीक हो ।
Previousएक्लिदै रावल, यस्तो छ गणितीय अवस्था
Nextआज धेरै ठाउँमा मेघगर्जनसहित पानी पर्ने
सेनाले ३ अर्बमा खरिद गरेको हेलिकोप्टर अलपत्र
प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक दिउँसो ३ बजे बस्दै
रामबहादुर बम्जनमाथि प्रहरीको अनुसन्धान जारी
सहिद स्मारकबी डिभिजन लिग फुटबलमा आज दुई खेलहरु हुँदै, काठमाडौं मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता शुरु ,५ टिमको सहभागीता
Mar 6, 2021 | खेलकुद, समाचार
नयाँ सरकार गठनको विषयलाई झ्यालबाट चियाइरहेको कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाई
विभाजित नेकपामा एकता प्रयास भइरहेको योगेशकुमार भट्टराईको जिकिर